ယွန်း: လွတ်လပ်ရေးနေ့အမှတ်တရ
အင်မတန်ပျော်ပါတယ်၊ တနေကုန်ဆော့နေရတာကိုးးး ဒါပေမဲ့ အသက်ကြီးလာတဲ့အခါ
တွေးတတ်လာတယ် ။ကျမတို့ နိုင်ငံရဲ့ လွပ်လပ်ရေးဆိုတာဘာလဲ...
လွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့် ၊ လွတ်လပ်စွာ ရေးသားပိုင်ခွင့်
စာနယ်ဇင်း လွတ်လပ်ခွင့်တွေ ၊ လူ့ အခွင့်အရေးတွေ ပိတ်ဆို့ ခံထားရတဲ့ ကျမတို့နိုင်ငံမှာ
ဒီလိုနေ့ မျိုးကို လူတွေအလေးအနက် မှတ်မှတ်ရရရှိကြရဲ့ လားလို့ ။
ဒါပေမဲ့ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် လွတ်လပ်ရေးနေ့လေးမှာ မှတ်မှတ်ရရ ဒီအခွေလေးကို ကျမကြည့်ခဲ့ပါတယ်
သူတို့ ဟာလည်း လွတ်လပ်ခွင့်အတွက် တိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့ သူရဲကောင်းတွေပါပဲ၊
အရမ်းကောင်းလို့youtube မှာရှာပြီး ကျမပြန်လည်မျှဝေလိုက်ပါတယ်..။
တချို့ ကလည်း ကြည့်ပြီး ဖြစ်မှာပါ ။
they have try to make the people forget her.
But she is still in our hearts.
စာရေးသူ ယွန်း မှ 6:20 PM
ဒါပေမယ့် ဘာဖြစ်လို့လည်းမသိ youtube ကိုကြည့်လို့ရဘူးးးးးးးးးး
နောက်နေ့မှပဲထပ်လာ try တော့မယ်...